Izizathu zokuba abantu bazikhuphe kubhaliso kwi-imeyile yakho (kunye nendlela yokunciphisa ukungazibhalisi) | Martech Zone
Izizathu zokuba abantu bazikhuphe kwi-imeyile yakho (kunye nendlela yokuNciphisa ukuNgabhalisi)
Ababhalisi abawukhathalelanga umahluko phakathi kokungabhalisi kunye nokumakisha nje i-imeyile njenge-SPAM… bayayenza yonke imihla. Abaziqondi iimpembelelo zokunika ingxelo nge-imeyile yakho njengoko i-SPAM inokukuthintela kwiibhokisi ezingenayo zamawaka ababhalisile ngakumbi kuMboneleli weNkonzo ye-Intanethi. Kungenxa yoko le nto sijonga esweni ngokusondeleyo ukufakwa kwe-inbox kunye namaqabane ethu kwi-250ok!
Ukufihla ikhonkco lokungabhalisi kwi-imeyile yakho ayizukunciphisa inani labangabhalisanga, iya kukufaka engxakini ngokufakwa kwebhokisi yakho engenayo. Musa ukumangaliswa ukuba olo luhlengahlengiso lincinci ulwenzayo kwitemplate yakho ye-imeyile ukwenza kube nzima ukungabhalisi imimoya ebulala ukubekwa kwebhokisi yakho engenayo kunye nenqanaba lokucofa emva koko kunye nenqanaba lokuguqula kwiimeyile zakho.
Izizathu eziphambili zokuba abantu bangabhalisi kwi-imeyile yakho
I-imeyile engalunganga uyilo okanye ukope (ungalibali itemplate ye-imeyile ephendulayo).
Ukugqithisa okanye ukukhawulelana ne-imeyile frequency. Kungenxa yoko le nto sinikezela ngemirhumo yemihla ngemihla kunye neyeveki ngencwadana yethu yeendaba I-CircuPress.
Ukuthumela ii-imeyile ngaphandle imvume.
Ayinamsebenzi Umxholo we-imeyile. I-24% yabaphenduli beBlueHornet bathi bayemka kuba i-imeyile ayibalulekanga!
Ukuphela kwe- Nikela okanye ukuthengisa.
Kuyacaphukisa okanye kuyalahlekisa sifundo umgca.
Ukudunga i Ngokwezifiso (nangona ndicinga ukuba ukwenziwa komntu kubi kakhulu kunenye).
Utshintsho lwe ukhetho, njengokuyeka inkampani okanye ishishini.
Le infographic evela ImeyileMonks inikezela ngengcebiso enkulu ekuphuculeni ukhetho lwakho lokubhalisela kunye nokwenza ezinye zeendlela ezilungileyo zokuphucula ukugcinwa koluhlu lwakho kunye nokunciphisa inani labangabhalisanga.
tags: Uyilo lwe-imeyileUbume be-imeyileumnikelo we-imeyileukwenziwa kwe-imeyileImigca yesifundo se-imeyileimeyile ayikhuphiemailmonksuluhlu lokugcinaindawo yokukhethaiziko lomrhumoUngabhalisi ezona ndlela zilungileyoUngabhalisi izizathukutheni abantu bezikhupha
I-AddThis yongeza ukuJoliswa kwaBantu ukuphucula ukuThethathethana, ukuGuqulwa kunye neNgeniso
Umxholo weNtengiso: Yeka ukuthengisa + ukuqala ukumamela